Dagaal ka dhacay duleedka degmada Balcad | XORRIYA NEWS
Home Wararka Dagaal ka dhacay duleedka degmada Balcad
Warar dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan dagaal Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomalaiya iyo Alshabaab Maanta ku dhexmaray degaan duleeka ka ah degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dagaalka ayaa yimid, kaddib markii Ciidamada Dowladda oo dhaq dhaqaaqyo ka wada Aaga degaanka Basra oo Galbeed kaga beegan degmada Balcad ay weerareen Xubno ka tirsan ururka Alshabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday.
Dad ku sugan degmada Balcad ayaa Risaala waxaa ay u sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kale uu hakad galay isku socodka dadka iyo Gaadiidka.
Sidoo kale dadka degmada Balcad ayaa waxaa ay sheegeen in saaka waberigii hore hawada laga saaray Isgaarsiinta Magaalada, isla markaana Ciidamada Dowladda oo watay Gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ay aadeen dhinaca Tuulada Basra oo ay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan Alshabaab.
Alshabaab ayaa sheegtay in dagaalkii ka dhaca Aaga Tuulada Basra ay Ciidamada Dowladda uga gubeen Gaari nooca Soomalaida u taqaano Cabdi Bilaha, kadib markii ay weerar jidgal ah ku sameeyeen Ciidamada.
Saraakiisha Ciidamada d owladda Soomaaliya ee Gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Maamulka degmada Balcad weli kama hadlin dagaalka Maanta Ciidamada dowladda iyo Alshababa ku dhexmaray Tuulada Basra ee duleedka degmada Balcad.